कुक टापुहरू अपतटीय सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट
कुक टापु ट्रस्ट विश्व भर मा सम्पत्ति सुरक्षा मा धेरै प्रदान गर्दछ। हवाईको दक्षिणमा अवस्थित, कुक टापुहरूले प्रबल सम्पत्ति संरक्षण कोसिस कानून ईतिहासको इतिहास राख्न समय र समय प्रमाणित गरेका छन्। प्रत्येक केस जसमा यसलाई चुनौती दिइयो, ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षित गरिएको छ। यहाँ एक उदाहरण छ। सबैभन्दा कडा कानूनी विपक्षी को हो? धेरैले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार भन्छन्। त्यहाँ जम्मा दुईवटा घटनाहरू थिए जहाँ अमेरिकी सरकारले यो विश्वास भ to्ग गर्न खोज्यो। दुबै केसमा सरकार गुमाए र सम्पत्ति ट्रस्टमा रहे।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी जानाजानी अमेरिकी सरकारबाट सम्पत्ति टाढा राख्न सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट स्थापना गर्दैनौं। त्यसैले हामी केवल एक कानूनी उपकरण को शक्ति चित्रण गर्न को लागी एक तथ्य लाई ध्यान दिएर छौं। यस प्रकार हामी कुनै व्यक्तिले यस तरीकाले त्यस्तो गाडीको उपयोग गर्नुपर्दैन।
कसरी कुक टापु ट्रस्टले काम गर्दछ
यहाँ कसरी स्थापना गरिएको कुक आइल्याण्ड्स ट्रस्टले कार्य गर्दछ। तपाइँको कानूनी विपक्षी अदालतले तपाइँलाई "पैसा फिर्ता गर" भन्ने माग गर्दछ। यसैले तपाईले सहयोगी भएर ट्रस्टीलाई पत्र लेख्नु भयो जुन तपाईलाई रकम फिर्ता गर्ने आदेश दिइएको छ भनेर थाहा दिनुहोस्। तपाईं पत्रको प्रतिलिपि राख्नुहुन्छ र एक ट्र्याकि number नम्बर र तपाईंले आज्ञापालन गरेको न्यायाधीशलाई देखाउनुहोस्। अर्कोतर्फ, ट्रस्टीले कुक टापु ट्रस्ट डीडमा लेखिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु आवश्यक छ। यो एक सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्ट हो। त्यसोभए, हामी ट्रस्टमा "ड्युरस क्लज" घुसाउँदछौं। उपधाराले कोषको आदेशबाट कार्य गर्न बाध्य भएमा ट्रस्टीलाई रकम छुट्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यसैले ट्रस्टी, जो तपाइँको देश बाहिर र तपाइँको अदालत को पहुंच बाहिर छ, सहयोग गर्दैन। तपाईं हानिबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ किनकि तपाईं न्यायाधीशका आदेशहरूको पूर्ण रूपले अनुपालन गर्नुभयो। त्यो हो, तपाईंले ट्रस्टीलाई रकम फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। तसर्थ, तपाईं एक स्थितिमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं न्यायाधीशको आदेशहरूको पूर्ण पालना गर्नुहुन्छ। ट्रस्टी, तथापि, गरेन, जुन एक वैध कानूनी रक्षा हो।
एक अपतटीय ट्रस्टको प्रयोग अपेक्षाकृत नेवाडा वा डेलावेयरमा कर्पोरेसन स्थापना गर्ने व्यवसाय मालिकसँग मिल्दोजुल्दो छ। उसले त्यसो गर्थ्यो उनीहरूको उच्च कानूनको कारण, अर्को राज्यमा कर्पोरेशन स्थापना गर्नु भन्दा। कुक टापुहरूमा विश्वासको स्थापना गर्नु वा उनीहरूको अनुकूल कानूनबाट फाइदा लिनको लागि अर्को उचित क्षेत्राधिकारमा समान छ। यो तपाईंको अवस्थाको लागि उत्तम कानूनहरूको साथ अधिकार क्षेत्र छनौट गर्ने कुरा हो।
म कसरी जान्न सक्दछु म कुक टापुहरूका विश्वस्तलाई विश्वास गर्न सक्छु?
पहिलो, ट्रस्टीले भित्र पस्नु आवश्यक पर्दैन जबसम्म "खराब चीज" हुँदैन। दोस्रो, त्यहाँ कहिले पनि विश्वस्त भएको छैन जसले ग्राहकको कोष लिएको छ। यो आंशिक रूपमा हो किनभने कुक टापु सरकार एकदम छनौट भएको छ जसलाई कसले विश्वसनिय अनुमति पत्र पाउन अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, तिनीहरू कठोर रूपमा तिनीहरूको वित्तीय सेवा उद्योग संरक्षण। यी कानूनी उपकरणहरू क्षेत्र को लागी राजस्व को एक ठूलो स्रोत हो। त्यसोभए, ट्रस्टीहरू इजाजतपत्र, नियमित रूपमा अडिट र नजिकबाट अनुगमित हुन्छन्। तेस्रो, एक बीमा कम्पनीले ट्रस्टीहरूलाई बन्धन गर्दछ, त्यसैले तपाईंको विश्वासमा कोषहरूको बीमा गरिन्छ। यसका अतिरिक्त, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईं यो कानुनी उपकरण स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ बेकम्मा र बेबाकी मुद्दाको बिरूद्ध सम्पत्ति सुरक्षित गर्न।
त्यसोभए, के तपाईं 100% मौका पाउनुहुनेछ तपाईंको पैसा अदालतहरू द्वारा लिइएको हो? वा तपाइँको सट्टामा एक इजाजतपत्र प्राप्त, बोन्डेड ट्रस्टी छ, जसले ग्राहकको पैसा कहिले लिएको छैन तपाइँले उनीहरूलाई तिर्नुभएको कुरा गर्नुहोस्: तपाइँको पैसा बचाउनुहोस्। थप, हामी एक ट्रस्ट कम्पनी प्रयोग गर्छौं जुन झन्डै चार दशक पुरानो हो।
"नराम्रो चीज" हुनु भन्दा पहिले, तपाइँ तारहरू तान्दै हुनुहुन्छ। तपाईं बैंक खाताहरू, आदि को नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ कसरी? हामी नेभिसको क्यारेबियन टापुमा एक अफशोर सीमित देयता कम्पनी (LLC) गठन गर्दछौं किनकि यो क्षेत्राधिकारले बेहतर LLC सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्दछ। ट्रस्टले LNC को 100% को स्वामित्व राख्छ। तपाइँ LLC प्रबन्धक हुनुहुन्छ। बैंक खाताहरू LLC मा समाहित छन्। तपाईं बैंक खातामा हस्ताक्षर हुनुहुन्छ।
त्यसो भए, समीक्षा गर्न, ट्रस्टले एक अपतटीय LLC को स्वामित्व राख्दछ। तपाईं अपतटीय LLC को प्रबन्धक हुनुहुन्छ। तपाइँ बैंक खातामा हस्ताक्षर नियन्त्रण राख्नुहुन्छ।
जब "नराम्रो कुरा" हुन्छ
जब "नराम्रो चीज" हुन्छ, ट्रस्टी तपाईको सुरक्षाको लागि कदम चाल्छ र LLC को प्रबन्धकको रुपमा तपाईलाई बदल्छ। त्यसोभए, जब तपाईंलाई रकम फिर्ता गर्ने आदेश दिइन्छ, यो ट्रस्टी, जो देश बाहिरै बस्ने र तपाईंको स्थानीय अदालतको माग द्वारा बाध्य छैन, तपाईंको खातामा पहरा दिनुहुन्छ।
दोहोर्याउनको लागि, ग्राहकको आर्थिक सुरक्षा र शान्तिको लागि, एक मात्र समय ट्रस्टीले सामान्यतया चरणमा हुन्छ जब अदालतले तपाईंको पैसा लिन्छ। त्यसोभए, उल्लेख गरिएझैं, प्रत्येक पटक 100% हुनु भन्दा यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कानुनी प्रतिद्वन्द्वी तपाईंको कडा कमाएको धनको साथ भाग्नेछ भन्ने भन्दा कन्सल्टेन्ट फन्डहरू सुरक्षित गर्ने कानूनी उपकरणमा आफ्ना कोषहरू सुम्पन राम्रो हुन्छ, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न? ?
एक पटक "नराम्रो चीज" कन्ट्रोलको स्ट्रिंगबाट हट्यो भने, LLC को व्यवस्थापन तपाईसँग फिर्ता जान्छ र तपाई ड्राइभरको सिटमा आउनु हुन्छ तपाईका सबै रकमहरू चालु रूपमा। जब तपाईं कानुनी समस्याको बीचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंको ट्रस्टीले तपाईंको तर्फबाट बिलहरू तिर्न सक्छ। उनीहरूले तपाईलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई पैसा पठाउन सक्दछन्, जसले तपाईको देखभाल गर्ने इत्यादि गर्छ। इत्यादि, तपाईलाई आर्थिक ख्याल राखिन्छ, तर तपाईका विपक्षीहरूले तपाईको नगदमा आफ्नो पावा लिन सक्दैनन्। यसको नतीजा यो हो कि तपाईंले परिश्रम गर्नु र मेहनत गर्नु भएको कोषहरू सुरक्षित र सुरक्षित छन्।
परम सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण
तपाईं यस पृथ्वीमा केवल एक मौका प्राप्त। त्यसोभए, हामी यहाँ कुरा गरिरहेका सुरक्षाको आनन्द लिन तपाईंको पक्षबाट कार्य गर्नु आवश्यक छ। विश्वास स्थापित छ। यसमा तपाइँको कोष राख्नुहोस्। हामीले धेरै ग्राहकहरू देख्यौं कि उनीहरूले हामीलाई यो विकल्पको फाइदाको मजा लिन र उनीहरूले काम गरेको सबै चीजहरू पालना गर्नका लागि हामीलाई गहिरो धन्यवाद दिएका छन्। अर्कोतर्फ, हामीले यो पनि देख्यौं कि ग्राहकहरूले विश्लेषणको पक्षाघातको माध्यमबाट सबै कुरा गुमाउँछन्।
त्यहाँ केहि स्व-ब्याज समूहहरू छन्, जस्तै कानूनी पेशाका ती सदस्यहरूलाई जुन भुक्तानी हुँदैन यदि तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षित छ भने, जसले तपाईंलाई ट्रस्ट सेट अप गर्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गर्दछ। उनीहरूले तपाईंलाई डराउने कोसिस गर्न सक्छन् र केहोरै विरलै केसहरू भेट्टाउन सक्छन् जहाँ न्यायाधीशले कानून अनुसरण गरेनन जहाँ त्यस्ता ट्रस्टका लाभार्थीहरूलाई हप्काइन्छ। के विचलितकर्ताहरू तपाइँलाई भन्न असफल हुन्छन् सम्पूर्ण कथा हो। एन्डरसनको मामलामा, उदाहरणका लागि, ट्रस्ट गलत सेट अप गरियो। यस ट्रस्टको स्थापना गर्ने वकीलले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ट्रस्टका दुवै लाभार्थीहरू र ट्रस्टको संरक्षक बनाए।
यो वकील को पक्ष मा एक मूर्ख गल्ती थियो किनभने यो लाभार्थी को ट्रस्टीहरु र लाभार्थीहरु लाई बदलने मा प्रभाव को अतिरिक्त स्थिति मा राखे। न्यायाधीशले भने कि ती किनभने लाभान्वितहरू पनि संरक्षक थिए कि उनीहरू आफैंले कार्य गर्न असम्भव सिर्जना गरे। यो एकदम राम्रो समाचार यो हो कि यो केस अविश्वसनीय नियम हो कि यस्तो अवस्थामा पनि जब ट्रस्ट गलत स्थापित भएको थियो, विश्वासले अझै पनि ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षित गर्यो।
मुद्दा मुद्दा जीवन का एक हिस्सा हो
प्रत्येक बगैचामा यसको बग र सामा छ। त्यसो भए, प्रत्येक बगैंचालाई टेन्ड गर्नुपर्दछ। त्यस्तो मूर्ख छैन भनेर सोच्नु हुँदैन। बगैंचामा टेन्डिंगले कार्य गर्दछ। तपाईंको वित्त जोगाउनु कुनै फरक छैन। तपाईंले आफ्नो वित्तीय बगैचा वा कानुनी बगहरू र वीड्स लिने सुरक्षाको लागि कार्य गर्नु आवश्यक छ। स्वस्थ बगैचा राख्न, कार्य आवाश्यक हुन्छ।
ट्रस्टले प्रदान गर्ने सब भन्दा कडा सुरक्षा भनेको सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खातामा रहेको तरल नगदको लागि हो। प्रयोग भएको बैंकको तपाईंको देश भित्र सम्बन्धित शाखा हुनु हुँदैन। घर जग्गाको सम्बन्धमा, स्थानीय अदालतहरूले स्थानीय घर जग्गा कब्जा गर्न सक्छन्। त्यसो भए, ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको LLC भित्र अचल सम्पत्ती स्वामित्व राख्नु ठीक छ। जे होस्, जब नराम्रो चीजले यसको कुरूप टाउको उठाउँछ भने छिटो सम्पत्ति बेच्न र कोषमा अप्शोर सुरक्षित गर्नु भन्दा यो राम्रो सँग गुमाउनु नै उत्तम हुन्छ। एक वैकल्पिक रूपमा, एक सम्पत्ती बिरूद्ध एक वैध लाइसेंस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र उक्त खातालाई ट्रस्ट / LLC संरचना भित्र यस्तो खातामा लक गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी प्रोफेशनल्सलाई बचाउँछौं
नियमित आधारमा, हामी वकिलहरूको लागि ट्रस्टहरू सेट गर्छौं जसले फलस्वरूप तिनीहरूलाई आफ्नै ग्राहकहरूमा पुन: बेच्छन्। हामी कानूनी पेशाका सदस्यहरूलाई सम्पत्ति संरक्षण सेमिनारहरू पनि सिकाउँदछौं। थप रूपमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि सीधा ट्रस्टहरूको भीड सेटअप गर्दछौं। सम्पत्ति योजना प्रावधानहरू ट्रस्टमा थप्न सकिन्छ; उदाहरणको लागि, "जब म मर्दछु सबै कुरा मेरो श्रीमान्‌ / श्रीमतीमा जान्छ र जब हामी दुवै मर्छौं सबै बच्चाहरूको लागि समान शेयरमा जान्छ," उदाहरणको लागि।
बजारमा एक सेवा प्रदायक देखि सावधान रहनुहोस् जसको युक्तिले हामीसँग छलफल गरिरहेका विकल्पसहित सबै अन्य सम्पत्ति सुरक्षा विकल्पलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै ट्रस्ट संरचना प्रमोट गर्दैछ। उसले आफ्नै कमजोर स्थानीय विश्वासलाई बढवा दिन्छ, जुन अदालतमा पक्राउ पर्दैन, र आफैंले सबै विकल्पहरूलाई इन्कार गर्दछ। भन्नु पर्दैन, उनले कुक टापुहरूमा विश्वासको शक्ति प्रमाणित गर्ने थुप्रै केसहरूको उल्लेख गरेनन्। उहाँ केवल थोरै ठगहरुका बारे चर्चा गर्नुहुन्छ जहाँ न्यायाधीशले कानूनको पालना गरेनन् र ट्रस्ट सेटलर्सलाई जिब्रो लगाए। यसबाहेक, उसले यस तथ्यको वरिपरि नाच गर्दछ कि ट्रस्टले ग्राहकको कोष प्रत्येक पटक सुरक्षित गर्थ्यो।
उनले पदोन्नति गरेको विकल्पको चर्को समस्या भनेको स्थानीय न्यायाधीशको नाकमुनि उडान झैं उसको स्थानीय ट्रस्टलाई बदल्न सकिन्छ। त्यसकारण, कुक टापुहरु द्वारा बारम्बार प्रदर्शित असमान शक्ति संग, हामी मध्ये धेरै जसमा सम्पत्ति संरक्षण क्षेत्र मा राम्रो मनसाय छैन सबै सहमत छन् कि यहाँ छलफल गरिएको ट्रस्टले प्रदान गर्दछ, आज सम्मको सबैभन्दा बलियो सम्पत्ति सुरक्षा उपलब्ध छ।
कुनै पनि समयमा कल गर्नुहोस्, 24 घण्टा प्रति दिन, कुक टापु ट्रस्ट, एक नेविस एलएलसी र एक अपतटीय खाता स्थापित गर्न को बारे मा अधिक जानकारी को लागी तपाइँको सम्पत्ती को रक्षा गर्न।